”Waxay la dagaallamayaan cadowga gudaha & dibedda!” – DF Itoobiya oo soo bandhigtay ciidan cusub + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxay la dagaallamayaan cadowga gudaha & dibedda!” – DF Itoobiya oo soo...
”Waxay la dagaallamayaan cadowga gudaha & dibedda!” – DF Itoobiya oo soo bandhigtay ciidan cusub + Sawirro
(Bir Sheleko) 29 Juun 2021 – Ciidamada Xoogga Dalka Itoobiya ayaa diyaariyey dufcaddii 33-aad ee ciidamo cusub oo dhibboow uga soo baxay Dugsiga Tababarka Ciidamada Millateriga ah ee Bir Sheleko kaddib markii ay tababarkii dhamaysteen.
Askartan cusub ayaa lagu wadaa inay ku biiraan ciidamada caadiga ah si ay ula dagaallamaan wax lagu sheegay ”dulmiga dibedda ka imanaya iyo kan gudaha” isla markaana ay u xoojiyaan ”midnimada Itoobiya, sida kasoo baxday Ciidamada ENDF.
Waxaa munaasabadda qalin jebinta ah ka qayb galay, Sarreeye Gaas Hachalu Sheleme, oo ah madaxda horumarinta raasumaalka dadka ee Wasaaradda Gaashaandhigga Itoobiya iyo Sarreeye Gaas Endalkachew Woldekidan, oo isaga ku xiga.
Warka cadowga ”gudaha iyo dibedda” ayaa la fahmi karaa in loola jeedo faragelin ay DF Itoobiya sheegtay inay samaynayaan dalal Galbeed ah, kuwaasoo ay ku eedaysay inay shidayaan colaadda Gobolka Tigraay.
Previous articleTigreega oo sheegay halka ay u socdaan & Imaaraadka oo la hadlay RW Abiy Ahmed (Waxa sahley guusha Tigreega ee Maqalla?)
Next articleKenya oo dad Soomaali u dhashay kula kacday arrin meel ka dhac ku ah qarannimada Somalia (Dhacdo ugub ah)